ईबुक: लाइफसाइकल मार्केटिंग भनेको के हो? | Martech Zone
ईबुक: लाइफसाइकल मार्केटिंग भनेको के हो?
मंगलवार, फेब्रुअरी 12, 2013 सोमवार, जुन 8, 2015 जेन लिसाक गोल्डिंग
जीवनचक्र मार्केटिंग भनेको के हो? हाम्रो अनुसार मार्केटिंग स्वचालन प्रायोजकहरू, जीवनचक्र मार्केटिंग हो:
… कसरी संगठनहरूले उनीहरूको ब्रान्डसँग उनीहरूको सम्बन्धको सबै चरणहरूमा सम्भावहरू र ग्राहकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्।
के तपाईंको कुराकानीले तपाईंको ब्रान्डलाई मद्दत गरिरहेको छ वा चोट पुर्‍याइरहेको छ?
विगत years० बर्षमा बिक्री र मार्केटि dra एकदम परिवर्तन भएको छ, विगत दशकलाई छोडिदिनुहोस्। फनेल जस्तो थियो त्यस्तै छैन। यो अब लाइनियर मार्ग होइन - मार्केटि auto स्वचालनले तपाईका ग्राहकहरूलाई व्यस्त रहनको लागि इन्धन दिँदैछ, तर आफ्नै गतिमा निर्णय लिनुहोस्। तपाईं अझै पनि ग्राहक प्रोफाईलको बारेमा जानकारी जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं टाढा रहनुभयो, जुन यो हो जुन धेरै सम्भावित ग्राहकहरूले यी दिन मन पराउँछन्।
Leads०% योग्य लीडहरू किन्न तयार छैनन्, र औसत बिक्री चक्र% 50% ले वृद्धि भएको छ।
यस ईबुकले जीवनचक्र मार्केटिंग र मार्केटि auto स्वचालन आजको युगमा किन अझ महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउँदछ। यो डिजिटल मार्केटिंगमा संलग्न विभिन्न लाइफसाइकल चरणहरूमा पनि जान्छ। थाहा छैन जहाँ तपाईंको संभावनाहरू ग्राहक जीवनसाइकलमा छन्, तपाईं तिनीहरूको सम्भावनाको पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुने छैन कसरी रूपान्तरण गर्ने उत्तम तरिका तिनीहरूसँग संलग्न गर्न।
के तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरुलाई ट्र्याक गर्न र संलग्न गर्न मार्केटि auto स्वचालन सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? किन वा किन छैन?
टैग: नेतृत्व पोषणनेतृत्व स्कोरिंगलाइफसाइकल मार्केटिंगमार्केटिंग स्वचालनमार्केटिंग लाइफसाइकलप्रोस्पेक्टिबिक्री सक्षमता
तपाईं वास्तवमै लिंक्डइनको १% मा हुनुहुन्छ?
माइक्रोसफ्टबाट ठूलो डाटा इनसाइट्स